१ करोड ९३ लाख ७३ हजारले कहिले पाउलान् खोप ? – Bikash Khabar
सोमबार, ३१ जेठ २०७८ गते ७:१९ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	286 Views
काठमाडौं,३१ जेठ । कोरोना संक्रमण रोकथामको प्रभावकारी उपाय मानिएको कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले राज्यसंयन्त्रका सबै अंगलाई कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि समन्वयत्मक र आक्रामक रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा कोभिड नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगतिसमेत हुन सकेको छैन ।
अब कोभिसिल्डको विकल्पमा एउटै प्रकृतिको एस्ट्राजेनेका खोप नेपाललाई प्राप्त भएपश्चात् १२ हप्तापछि पनि सो खोपलाई दोस्रो मात्राका रूपमा लगाउने व्यवस्था मिलाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोनाविरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएको ८ देखि १२ हप्ताभित्रमा दोस्रो डोज लगाइसक्नुपर्नेहुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले खोप उपलब्धताका लागि विभिन्न देशलाई आग्रह गरे पनि खोप आउने सुनिश्चितता अझै नभएको बताए । डा. पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै देशबाट पनि खोप उपलब्धताको सुनिश्चितता पाएका छैनौं । हाल चीन सरकारले उपलब्ध गराएको भेरोसिल खोप जेष्ठ नागरिकलाई लगाउने कार्य जारी छ ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले खोप आयातका लागि कूटनीतिक रूपमा पहल भइरहेको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना खोपका लागि ४ खोप उत्पादक कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपालमा दर्ता भएका कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन, चिनियाँ खोप भेरोसेल, अमेरिकामा उत्पादन भएको खोप जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई ५० लाख डोज खोप खरिदका लागि पत्राचार गरे पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन ।
हालसम्म ४१ लाख ४८ हजार कोरोनाविरुद्धको खोप भित्रिएको छ । भारत सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा, खरिद गरिएको १० लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै, चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको १८ लाख मात्रा र कोभ्याक्स फ्यासिलिटीअन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार मात्रा खोप नेपाल आएको छ ।
कोभ्याक्सले नेपालको खोप लगाउने जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतलाई पुग्नेगरी १ करोड ३० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि यसबारे ठोस परिणाम निस्किन सकेको छैन ।
यस्तै, कोरोनाविरुद्धको खोप अत्यधिक माग र मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु नै खोप अभियानमा चुनौती रहेको सरकारले औंल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मागअनुसार खोप आपूर्ति हुन नसक्दा अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका क्रममा कठिनाइ भएको औंल्याएको हो । सरकारले निकट भविष्यमै खोप ल्याउने भनेर आशा देखाए पनि खोप सन्दर्भमा ठोस परिणाम ननिस्किँदा आमनागरिक चिन्तित बनेका हुन् ।
यस्तै, पूर्वतयारीको समय कम भएकाले खोप लिने व्यक्तिको सूची तयार गर्न चुनौती रहेको, निश्चित स्थानमा खोप केन्द्र रहेकाले खोप सेवाको पहुँचमा कमी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले हाल सञ्चालन गरेको भेरोसिल खोपमा जेष्ठ नागरिक (६० देखि ६४ वर्ष)लाई प्राथमिकीकरणमा राखे पनि अन्य समूहले यो खोप लगाएको पाइएको छ ।
यस्तै, जेष्ठ नागरिकहरूको खोप केन्द्रसम्म सहज पहुँच नभएको, समयमै पर्याप्त खोप प्राप्त नहुँदा सूचना सम्प्रेषणमा कठिनाइ भएको बताइएको छ । खोप अभियान सञ्चालका क्रममा दैनिक खोप प्रगति विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको स्वास्थ्यको बुझाइ छ । अहिलेसम्म कति नागरिकले खोप लगाए भन्नेबारेमा विस्तृत तथ्याकंगत विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।
हाल नेपालमा कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोप उपयोगमा आएको छ । अध्ययन अनुसन्धानले कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता ८१ दशमलव १३ प्रतिशत र भेरोसेल खोपको प्रभावकारिता ७९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । राजधानी दैनिक बाट।